တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု စာပေ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းပြပွဲ တောင်ကြီးမြို့ ?? - Yangon Media Group
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု စာပေ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းပြပွဲ တောင်ကြီးမြို့ ??
‘တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုစာပေ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့်စာပေယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းပြပွဲ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ကြီး)’ကို မတ် ၂၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ တောင်ကြီးမြို့၊ အဝေရာမီးပုံးပျံကွင်း၌ ပြသမည်ဖြစ်ပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် ရှမ်းလူမျိုးစုအလိုက် စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစာတမ်းများကိုဖတ်ကြားသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါပြပွဲကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စာတမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသများ၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအသင်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်သည်။
”စာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ခု ကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ လာမယ့် ၂၁ ရက်မှာ တောင်ကြီးမြို့မှာကျင်းပဖို့ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများရဲ့စာပေများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်’တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ စာအုပ်စာပေပြပွဲ၊ ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းပြပွဲ’ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများရဲ့စာပေများ ယဉ် ကျေးမှုများ၊ စာတမ်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်း ဘယ်သူ့ဆီမှာ ဘာစာအုပ်တွေရှိတယ်ဆိုတာ အပြန်အလှန်သိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မတ် ၁၇ ရက်တွင်ပြုလုပ်သည့် ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းစာပေဆု ပေးပွဲတွင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်က ထည့်သွင်း ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများအနေ ဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ၃၃ မျိုးရှိပြီး ရှမ်းလူမျိုးစုအလိုက်စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ်သက်သော စာတမ်းများကို ဖတ်ကြားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီး မြို့မှာ’တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုစာ ပေ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့်စာပေယဉ် ကျေးမှုပစ္စည်းပြပွဲရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ကြီး)’ကျင်းပမယ်လို့ပြော ပါတယ်။ တကယ့်ကို အခွင့်အရေး ကြီးတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေ ပေါင်း စုဖွဲ့စည်းထားတယ်။ ဒီလိုမျိုးတိုင်း ရင်းသားလူမျိုးစုတွေကို အခွင့် အရေးပေးတော့ မယုံချင်စရာဖြစ်သွားတယ်။ ပြပွဲကို ကချင်ပြည်နယ်ကရှမ်းတွေလာမယ်။ ကချင်ပြည် နယ်မြို့လေးမြို့လောက်က လာ မယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ခန္တီးကလည်းလာမယ်။ ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေမှာ လူမျိုးစု ၃၃မျိုး ရှိတယ်။ လူမျိုးစုတွေ အားလုံး တော့မပြနိုင်ဘူး။ လောလောဆယ် ခန့်မှန်းခြေလူမျိုးစုငါးမျိုးလောက်ကတော့ ပြပွဲမှာပြနိုင်တယ်။ စာ ပေနဲ့ပတ်သက်တာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတမ်းတွေဖတ် ဖို့ရှိတယ်။ ရှမ်းစာဗျည်း၊သရတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့စာတမ်းလည်းပါတယ်” ဟု ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအ သင်း(တောင်ကြီးမြို့)ဥက္ကဋ္ဌ ဦး စိုင်းတင်က ပြောသည်။ အဆိုပါပြပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုကို ပေ ၂ဝ ခန့် ရှိသော ပြခန်းတစ်ခုစီစဉ်ပေးထား ကြောင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး စုများ၏ရိုးရာအစားအသောက် များ၊ ရိုးရာအဝတ်အထည်များကို ပြပွဲတွင် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အသင်း(တောင်ကြီးမြို့)မှ သိရ သည်။
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူအား သေဒဏ်ပေးရေး မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဇီးပင်ကြီး အထက(ခွဲ)တွင် စာသင်နေချိန် မျက်နှာကြက် ထုပ်တန်း ပြိုကျ ဆရာမနှင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင??
အမြန်လမ်းပေါ်ဘုရားဖူးယာဉ် ဘီးပေါက် တိမ်းမှောက် တစ်ဦးသေ၊ ၁ဝဦး ဒဏ်ရာရ
MoU ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြမည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၂၀၀ ကျော်ကို မြ၀တ
ရာဇဝတ်ကောင် တစ်ဦးကဲ့သို့ ရေးသားဖော်ပြနေသည့် မီဒီယာများကို မော်ရင်ဟို ဝေဖန်၊ အသင်း၏ အားနည?
ဘန်ကောက်တွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုများကြောင့် ရုံးနှင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများကို ဝန်ထမ်းအိမ်များ၌ လ?